MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2012-11-11
(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်ပြည်နယ် ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း ကျားထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး နယ်မြေ ထောက်ပံ့ငွေကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန်နှင့် ယင်းစီမံကိန်းအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပေးရန် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘာ မားအား ကချင်တောင်သူများက အိတ်ဖွင့်ပေးစာဖြင့် တောင်းဆိုလိုက် သည်။
သမ္မတ အိုဘားမားထံ ပေးပို့မည့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် သစ်တောဧရိယာ များ၊ သဘာဝတောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်တို့၏ နေထိုင်ရာ အရပ်များနှင့် ကျား ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ(ကျားဘေးမဲ့ကျိုးဝိုင်း)ရှိ အသေးစား ရိုးရာ စိုက် ခင်းများကို အကြီးစား စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းအတွက် ရှင်းလင်းဖျက်ဆီး ခြင်းခံနေရကြောင်းနှင့် ဒေသခံလူထုများသည် ကုမ္ပဏီ၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်း ခံနေရသည်ဟု နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်တွင် ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ KDNG က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
at 11/16/2012 11:13:00 PM No comments:
at 11/16/2012 09:13:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲ အတွင်း အစိုးရ တပ်ဖွဲ့မှ အကျဉ်းသားများကို အသုံးပြုကာ ရှေ့ပြေး မိုင်းရှင်း ကိရိယာ အဖြစ် အသုံးပြု ခဲ့သည်ဟု ဖါးကန့် ဒေသမှ KIA တပ်မဟာ (၂) မှ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
“ ကျနော်တို့က လုံခင်းရွာကို ရောက်နေတဲ့ ဖါးကန့် တပ်ကိုရော မြစ်ကြီးနား ကနေ တက်လာမဲ့ စစ်ကား အစီး (၂၀) ကိုပါ တိုက်ခိုက်ဖို့ မိုင်းထောင်လိုက်တာပါ။ ဒီကားလမ်း တလျှောက်မှာ ကျနော်တို့ မိုင်းထောင်ထားလိမ့်မယ်လို့စစ်တပ်က တွက်ဆပြီး သားပါ။ ဒီတော့ သံသယဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေကို အကျဉ်းသား ကားတွေကို အရင် လွှတ်တဲ့ သဘောပါ။ ကျနော်တို့ ကလည်းဖါးကန့် အထွက်နဲ့ မိုးကောင်း အထွက်မှာ မိုင်းထောင်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ဖါးကန့်ကနေ လုံခြုံရေး အပြည့်နဲ့ စစ်ကား (၅) စီး ဆင်းလာတော့ ကျနော်တို့က မိုင်းခွဲပြီး တိုက်ခိုက် လိုက်တာပါ။ အကျဉ်းသား မှန်းလည်း မသိပါဘူး၊ အစိုးရဖက်က သတင်း ထွက်လာမှ အကျဉ်းသား ကားတန်းလို့ ပြောမှ သိရတာပါ” ဟု ဆိုပါသည်။
ဤတိုက်ခိုက်မှု၌ အကျဉ်းသား (၂) ဦးသေပြီး (၁၄) ဦး ဒါဏ်ရာရကြောင်း မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာက ဆိုပါသည်။ သေကြေ ဒဏ်ရာရသော အကျဉ်းသား များသည် လက်နက်ကြီးများနှင့်အတူ စစ်ကားဖြင့် တင်ဆောင် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု KIA က ဆိုပါသည်။ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် အကျဉ်းသားများကို ပေါ်တာအဖြစ် အသုံးပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
at 11/16/2012 08:50:00 PM No comments:
at 11/16/2012 08:39:00 PM No comments:
ဧရာဝတီ| November 16, 2012
နိုင်ငံတကာမှ ကချင် အဖွဲ့ ၃၄ ဖွဲ့ စုစည်းထားသည့် ကချင် မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Kachin Alliance) က မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားထံ အိတ်ဖွင့်စာတစောင်ကို ယမန်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ပေးပို့လိုက်သည်။ ယင်းပေးစာတွင် သမ္မတ အိုဘားမား ခရီးစဉ်သည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆိုးဝါးနေဆဲဖြစ်သည့် မြန်မာအစိုးရကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရာ ရောက်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် အရပ်သားများအပေါ် အစိုးရတပ်များ၏ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ရွာပုန်းရွာရှောင် ဒုက္ခသည်များအရေး ကုလသမဂ္ဂ အခန်းကဏ္ဍကို လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း၊ ဤရလဒ်များကြောင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအရေး မှေးမှိန်နိုင်ပြီး နိုင်ငံ မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
at 11/16/2012 08:33:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang, Dap Ba (2) Up Hkang Ginra rai nga ai Mohgaung - Kamaing lam Hka San Mare hte Gauri Mare lapran kaw dai ni November (16) ya shani hkying (1:30PM) ten ram hta KIA myu tsaw share ninghkring ni kawn myen asuya hpyen hpung ni hpe bawm hte hkap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn bawm hte hkap gasat ai hta myen maga na (2) si nna, (1) hkala hkrum wa sai lam na chye lu ai. N dai myen hpyen asuya hpyen hpung ni gaw ya ten Gauri lahta Man Den mare kaw hkring nga ai lam matut na chye lu ai. Kamaing Mare kaw mung myen hpyen asuya niahpyen mawdaw (37) nna, mawdaw kaba (5) daram kaw gaw grai li ai rai ni htaw da ai lam, buga masha ni gaw myen hpyen ni laknak kaba ni htaw lung wa ai rai na re nga nna tak sawn nga ma ai lam na chye lu ai.
Myen hpyen asuya ni Hpakant Ginra de ya na zawn kalang mi bai hpyen n gun kaba hte htu gasat wa ai lam gaw Hpakant de Lungseng htu ai Lauban ni kawn n dai November (20) ya shani kawn Lungseng bai lu htu sha hkra Shanglawt ni hpe lawan gasat kau na matu myen hpyen asuya ni hpe shadut ai majaw re lam buga masha ni kawn na chye lu ai.
at 11/16/2012 08:17:00 PM No comments:
at 11/16/2012 08:15:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ဖားကန့်လမ်း ဂေါ်ရီ၊ နန့်ဟိုင် ကျေးရွာများတွင် နိုင်ဝင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ (၁၈) ဦးကျဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ နိုဝင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့၌ပင် ဒိန်ကီးကျေးရွာ၌ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရစစ်တပ်တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲမှ ဒဏ်ရာရ ဗမာစစ်သား (၁၈) ဦးကို ကားမိုင်းဆေးရုံသို့ လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ဦးမှာ ဆေးရုံရောက်ရောက်ခြင်း သေဆုံးသွားကြောင်း ဆက်လက်သတင်းရရှိပါသည်။
at 11/15/2012 09:12:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် အေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ကားမိုင်းလမ်း ဂေါ်ရီကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပွားသော ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များ၏ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ (၈) ဦးသေဆုံး ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ စစ်အင်အားအပြည့် တင်ဆောင်လာသော ဗမာအစိုးရ စစ်ကားတစ်စီးကိုလည်း ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤဂေါ်ရီ ကျေးရွာ၌ပင် ညနေပိုင်း (၄း၃၀) နာရီအချိန်၌ ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 11/15/2012 09:10:00 PM No comments:
at 11/15/2012 08:33:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) Up Hkang Ginra rai nga ai Mohgaung - Hpakant lam ntsa na Gauri, Nam Sheng mare ni hta KIA Dung (6) na Myu Tsaw Share Ninghkring ni hte myen hpyen asuya hpyen hpung ni November (14) ya shani gasat ai hta myen hpyen dap maga na si hkrum lai wa ai marai (18) re lam shawng lam shiga lawk kawn na chye lu ai. November (14) ya shani sha Ding Kri mare dingsa hta gasat ai kaw na myen hpyen la hkala hkrum ai marai (18) hpe Kamaing tsi rung de wa sa da lai wa sai lam hte langai mi gaw tsi rung kaw du ai hte si mat nna mare masha ni hpe lup makoi kau shangun lai wa sai lam shiga na chye lu ai.
at 11/15/2012 08:30:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ၊ လုံးခင်းအုပ်စု ငါးမိုင်ကျေးရွာ အနီးတွင် နိုဝင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီခန့်က ဖားကန့်မြို့မှ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဘဏ္ဍာငွေနှင့် အချုပ်သား (၁၈၆) ဦး တင်ဆောင်လာသော ယာဉ်တန်းမှာ ကေအိုင်အေလက်နက်ကိုင်များ၏ ပစ်ခတ်ခြင်းခံရပြီး အချုပ်သား (၂) ဦးသေဆုံးကာ အချုပ်သား (၁၄) ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
at 11/15/2012 08:29:00 PM No comments:
at 11/15/2012 11:39:00 AM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) Up Hkang Ginra rai nga ai, Mohgawng - Kamaing lam lapran Gauri Mare kaw dai hpawt daw KIA Dung (6) na Myu Tsaw Share Ninghkring ni hte myen tai hpyen ni gap gasat ai hta myen hpyen maga na marai (8) si hkrum lai wa sai lam shiga na chye lu ai. KIA Myu Tsaw Share Ninghkring ni kawn myen hpyen asuyaahpyen mawdaw (1) mi hpe mung lu kapaw kau ya lu ai lam na chye lu ai. N dai Gauri Mare kaw sha dai na magang hkying (4:30PM) ten ram hta kalang mi bai gasat hpang wa sai lam shiga matut na chye lu ai.
at 11/14/2012 11:35:00 PM No comments:
at 11/14/2012 11:34:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ မော်ဝမ်းဗျူဟာကုန်းနှင့် လမောင်းကုန်း ကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ(၁၄)ရက်၊ (၁၂နာရီ၊၂၂မိနစ်) အချိန်ခန့်တွင် ကေအိုင်အေ(KIA)နှင့် တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
''နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်ကြတာပါ။တပ်မတော်က ဗျူဟာကုန်းကနေ လမောင် ကုန်းကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ။ လူကတော့တစ်ဦးမှ မထိပါဘူး'' ဟု ဖားကန့်မြို့မှဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ မိုးကောင်း-ဖားကန့် လမ်းပိုင်းမှာလည်း ကေအိုင်အေဘက်မှ စစ်ဆေးမှုများပြားလျက်ရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိသော အမျိုးသား များမှာ နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့မှစ၍ တက်ခွင့်မပြုဟု စုံစမ်းသိရှိရ သည်။
at 11/14/2012 08:14:00 PM No comments:
at 11/14/2012 08:01:00 PM No comments:
HPUNGLUM YANG ဒုက္ခသည်စခန်း၊ လိုင်ဇာ
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ မုန်ဂါဇွမ် ဇိုင်းအောင် (Mungga Zup Zai Awng) ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် အဆုပ်တီဗီရောဂါနှင့် HIV/AIDS ဝေဒနာခံစားသူ ဒုက္ခသည် အယောက် (၃၀) ကျော်ရှိရာ ပုံမှန်ဆေးများစားသုံးရန်ပြတ်လပ်မှုကြောင့် အခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရ ကြောင်းသိရသည်။
at 11/14/2012 07:55:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ဆွမ်ပရာဘွမ် - ပူတာအိုလမ်း ဆွမ်ပီယန် ကျေးရွာသို့ အင်စင်ခတံတားစောင့် ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခလရ (၄၆) နှင့် ခလရ (၁၃၈) မှ (၆၆မမ) လက်နက်ကြီးများဖြင့် နိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက် နေ့ မနက် (၂း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။ ဤသို့ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များ၏ လက်နက်ကြီးများ ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် ရွာသားများ၏ နေအိမ်များပျက်စီးသွားကြောင်း ဆက်လက် သတင်း ရရှိပါသည်။
at 11/14/2012 07:51:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) Up Hkang Ginra rai nga ai Mohgaung - Hpakant lam ntsa November (14) ya shani jahpawt hkying (10) ten kawn KIA Dap Dung (6) na myu tsaw share ninghkring ni hte myen asuya hpyen hpung ni shara shagu gap gasat nga sai lam shiga na chye lu ai. Nam Sheng, Lagat Yang, Ga Matep hte Dai Kyi mare ni hta Myen hpyen asuyaatatma (88) n pu na hpyen dap ni rai nga ai tatyin (89), (381), (260) ni hte gap gasat nga ai re lam na chye lu ai. Mohgaung (8) Miles lam num braw kaw mung myen asuya hpyen mawdaw (35) tup du taw nna, Hpakant lam de lai lung wa ai myen hpyen hpung ni hpe KIA myu tsaw share ninghkring ni bawm hte hkap gap gasat ai majaw myen hpyen ni ram ram si hkala wa sai lam shiga na chye lu ai. Majan gaw ya shiga ka taw ai ten du hkra matut manoi naw gasat nga ai lam matut na chye lu ai.
at 11/14/2012 07:49:00 PM No comments: